DHAGEYSO: Madaxweyne Waare ”Shabaabkii ugu badnaa ayaa u soo guuray deegaanada Hirshabelle”! | HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul waxaa uu kaga hadlay falalka amni darro ee kusoo kordhay deegaannada Maamulkaas iyo weerarada ay ka fuliyaan maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Mudane Waare ayaa xusay, in wax badan ay qarsadeen xaaladaha Amni-darro ee ka jira Hirshabeelle, balse ay haatan gaartay heer aysan qarsan Karin.
Wuxuu hadalkiisa intaasi raaciyay, in maleeshiyaadkii Ururka Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaannada Gobolka Shabellaha Hoose ay u soo guureen deegaannada Hirshabeelle.
”Runtii howlgallo ayaa ka socda Shabellaaha Hoose, aniga dadka halkaasi degan waan rabnaa in cadawga laga dulqaado, balse weli lama dhameyn waayo Al-Shabaabkii ku sugnaa Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa uu u soo guuray deegaannada Hirshabeelle”, ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Madaxweyne Waare ayaa sidoo kale, sheegay, in dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dadka reer HirShabeelle inay si wadajir ah wax uga qabtaan dhanka Amniga iyo arrimaha la xiriira kaabayaasha Dhaqaalaha.
Wuxuu ku soo aadayaa hadalka madaxweynaha maamulka Hirshabelle, xilli maalin ka hor weerar ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad lagu dilay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Halka hoose ka dhageyso Codka Madaxweyne Waare:
ayaa u soo guuray deegaanada Hirshabelle
Shabaabkii ugu badnaa